WorkSource Oregon waa dhigaal halmar joogsi u ah ganacsiyada. Dhammaan adeegyadu lacag la'aan ayaad ku heli adiga.
Shaqooyinka la soo dhejiyo ee bilaashka ah
iMatchSkills waa keydka ugu ballaaran ee shaqodoon ee ka jira gobolka, ee leh xirfadaha ugu baaxadda ballaaran. Wax lacag ah lama qaado si loo geliyo shaqooyinka ama loo raadsado xirfadyaqaan. Same isku beegidaada shaqo ama ku diyaarso qorshaha shaqaaleyn WorkSource Oregon.
Wax ka badan boor shaqo: iskaashiga
Shaqaaleeyeyaasha maxalliga ah ee xiriirada leh ayaa dhageysta oo soo gudbiya xalal dhab ah. Waxaan ku kulmi doonaa goobtaada, waxaan ogaan doonaa ganacsigaaga, waxaana ka wadahadli doonaa dookhaaga shaqaaleynta si aan u buuxino baahiyaha gaarka ah ee shirkaddaada.
Shaqaalaha bixiya nooc kasta oo shaqo
WorkSource waxay kugu xireysaa xirfadyaqaan khaas ah iyo guud—dhammaantood laga wada helo hal goob. Waxaan soo bandhigi doonaa shaqooyinkaaga furan, waxaan qaban doonaa dhammaan macluumaadka xiriirka ee codsadaha, baari doonaa codsadeyaasha, qaban doonaa wareysiyada ugu horreeya, waxaana kaliya kuu soo diri doonaa shaqodooneyaasha ugu fiican ee buuxiya shuruudahaaga.
Qor. Raaji. Xalli.
Munasabadaha shaqaaleynta, tababarka, canshuur dhimista, iyo wax badan. Tababarku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah kharashaadka shaqaalaha ee ugu qaalisan. Barnaamijyadeenu waxay kuu dhowri karaan waqtiga waxayna kaa caawin karaan daboolida kharashaadka tababarka inta aad dhisayso xoog shaqaale oo leh xirfadaha aad u baahan tahay.
WorkSource ayaa kaa caawin karta:
Qorista shaqooyinka la dhejiyo si loo helo natiijooyinka wanaagsan
Isku keenida shaqodoonka shaqooyinka iyadoo loo marayo bandhigyada shaqo iyo munaasabadaha shaqaaleynta
Aqoonsashada canshuur dhimista suurtagalka ah
Bixinta falanqaynta xogta shaqaalaha ee la habeeyay
Ogaanshaha heerarka gunnadda suuqa ugu fiican si aad u soo jiidato oo aad u raajiso xirfadyaqaanada
Kor ugu qaadida shaqaalaha xirfadda leh tababarada shaqo, tababarada shaqaale iyo xulashooyinka tababar
WorkSource waxay halkan u joogtaa inay shuraako kula noqoto. Sannad kasta wakiilladayada Adeegyada Ganacsi waxay u adeegaan 9,700 ganacsi, waxay dhajiyaan 250,000 shaqo, waxayna gacan ka geystaan 34,000 shaqaaleysiin. Kooxdayadu ha caawiyaan kooxdaada.
Barnaamijyada & Canshuur Dhimista iMatchSkills Nala Soo Xiriir
Barnaamijyada Ganacsi & Canshuur Dhimista
WorkSource Oregon waxay leedahay barnaamijyo iyo canshuur dhimis kaa caawin karta inaad heshid xirfadyaqaan, lacag dhaqaalaysato, oo kobciso ganacsigaaga. Wakiilka adeegyada ganacsi ee deegaanka ayaa u heelan inuu iskaashi kula sameeyo. Waxay kugula kulmi doonaan goobtaada, waxay ogaan doonaan baahiyaha gaarka ah ee shirkadaada, waxayna kaa caawin doonaan sidii xal loogu heli lahaa.
Qoris Tababar Kobcin
Shaqaalee Hawlwadeeno Tayo leh
WorkSource waxay kugu xireysaa xirfadyaqaan khaas ah iyo guud—dhammaantood laga wada helo hal goob. Waxaan kaa caawin karnaa inaad qorto sharraxaadaha shaqo, shaacino shaqooyinkaaga furan, wax ka qabano dhammaan macluumaadka xiriirka codsadaha, kala saarno codsadeyaasha, qabano wareysiyada bilowga ah, oo soo gudbino oo keliya shaqodoonka ugu fiican ee buuxiya shuruudaada. Waxaan isku celcelis ahaan shaqaaleynaa 1 qof 3.4 qof kasta ee la soo gudbiyo ee ku jira liisaska shaqaaluhu gacanta ka geysteen. Waxaan sidoo kale aqoonsan doonaa canshuur dhimista suurtagalka ah waxaana kula wadaagi doonaa gunnada suuqa ugu fiican si aan kaaga caawino soo jiidashada iyo raajinta xirfadyaqaanka.
Qor oo Shaqaalee Halyeeyada. Baro waxtarka shaqaalaynta halyeeyada iyo Barnaamijka Billada Shaqaaleynta Halyeeyada. Ku xirnow Wakiilka Shaqobixiyaha Halyeeyada Deegaanka kaasoo kaa caawin kara inaad buuxiso baahiyahaaga shaqaale iyadoo la qorayo lana raajinayo halyeeyada.
Canshuur Dhimista Fursadda Shaqo. Hel canshuur dhimis u dhaxeysa $1,500 ilaa $9,600 shaqaaleyn kasta adigoo shaqaaleynayo dadka wajaha carqabadaha shaqo, sida: qaar ka mid ah halyeeyada, dadka qaata TANF ama SNAP, dadka naafada ah, dadka horey xabsi u soo dhammeystay, dadka shaqo-la'aanta ahaa in ka badan lix bilood, iyo wax badan.
Barnaamijka Jobs Plus. Shaqaalee dadka qaata TANF oo dib lacagta nooga hel ilaa in dhan gunnada ugu yar ee Oregon oo lagu daray canshuuraha gunnada shaqaaleeyaha iyo kharashaadka magdhawga shaqaalaha.
Barnaamijka Shaqaalaha ee La Doorbidayo. Shaqaaleysii dadka naafonimada joogtada ah ay ka soo gaartay dhaawacyada goobta shaqada oo dib u hel bar ka mid ah gunnada shaqaalaha ee la doorbidido muddo lix bilood ah.
Damaanadqaad Dawladeed. Ku hel $5,000 damaanadqaad dawladeed ah, si bilaash ah, dhiirigelin u ah shaqaaleynta shaqodoonaha aan u-qalmin dammaanadka dawladeed ee ganacsi. Barnaamijkan, oo ay kafaalaqaadayso Waaxda Shaqada ee Mareykanka, wuxuu ka leeyahay 99% oo heerka guul ah wadanka oo dhan.
Barnaamijka Shahaadada Shaqaalaha Ajnabiga ah (FLC). Haddii aad la kulmayso shaqaale yari, FLC waxay kaa caawin kartaa inaad hesho shahaadada H-2A iyo H-2B ee kumeelgaarka ah iyo inaad u hoggaansato shuruudaha la xiriira.
Tababarka & Raajinta
Tababarku wuxuu noqon karaa mid ka mid ah kharashaadka shaqaalaha ee ugu qaalisan. WorkSource waxay kaa caawin kartaa inaad kobciso shaqaale xirfad leh--iyo kor ugu qaadida xirfadaha shaqaalahaaga hadda jira--tababar shaqo, tababar shaqaale, iyo xulashooyin tababar. Waxaan kaa caawin karnaa bixinta kharashaadka tababarka.
Barnaamijka Ku Tababarashada Shaqada (OJT). Ku keydso lacag OJT adoo dib laguu siinayo lacagta ilaa in dhan 50% gunnada shaqaaleynta cusub (ilaa $ 5,000) inta lagu jiro bilaha ugu horreeya ee ku tababarashada shaqada.
Barashada Xirfadaha. Barashada shaqooyinka waxay ka kooban yihiin ku tababarashada shaqada ee la kormeero ee leh ku waxbarida fasalka.
Work Share. Ka fogow shaqo ka fadhiisinta oo raaji xirfadyaqaanka xilliga si kumeelgaar ah hoos u dhaca ugu yimaado ganacsiga. Work Share waxay kuu oggolaanaysaa inaad raajiso shaqaalaha xirfadda leh xilliga hoos u dhaca shaqo jiro iyadoo la yareynayo saacadaha shaqada. Shaqaalaha u-qalma ee saacadahooda iyo gunnooyinkooda la dhimay waxay helayaan macaashka caymiska shaqo-la'aanta si loogu magdhabo gunnada luntay.
Haddii aad tixgelinayso shaqo ka fadhiisin, nala soo socodsii. Kooxdayada Jawaab-celinta Degdega ah waxay kaa caawin karaan inaad iska ilaaliso shaqo ka fariisinta, ama waxay bixin karaan taageero loogu talagalay shaqaalaha la ceyriyo. Waxaan imaan doonaa goobtaada, waxaan la kulmi doonaa shaqaalahaaga, waxaan ka diiwaangelin doonaa iMatchSkills, waxaan kala hadli doonaa u raajinta shaqo kale, waxaana ku xiriiri doonaa dhigaalada.
Waxaan bixinaa falanqaynta xogta si aan kaaga caawino inaad sii odorosto oo aad u diyaargarowdo isbeddelada dhaqaale.
Qorshee hab aad ugu kobocdo Iskaashiyada Waaxeed. Dhinacyadayada WorkSource waxay isugu keenaan ganacsiyada waax ahaan, waxayna si wadajir ah u go'aamiyaan sida ugu wanaagsan ee loo kobcin karo waaxda. WorkSource waxay isu keentaa horumar dhaqaale, qandaraasleyaal, maamulada guriyeynta, iyo wax badan. Waxaan abuurnaa barnaamijyada tababarka shaqo, waxaan la shaqeyneynaa kulliyadaha maxalliga, waxaana u doodnaa guriyeynta si shaqaalahaagu u kobcaan.